रस्साकस्सीपछि टुंग्यायो नेकपाले जिल्ला नेतृत्व कसैलाई पदैपदको खात,कसैलाई जीवनभर लात ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
रस्साकस्सीपछि टुंग्यायो नेकपाले जिल्ला नेतृत्व कसैलाई पदैपदको खात,कसैलाई जीवनभर लात !
काठमाडौ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपाले जिल्ला नेतृत्व टुंग्याएको छ । सामान्य विधि, बढि गुटगत आधारमा टुंग्याइएको जिल्ला एकताले कुनै नेतालाई पदमाथी पद थपिदिएको छ भने धेरै नेताहरुलाई बेरोजगार बनाइ दिएको छ ।